Astrology – ပဒသော
ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ရှယ်လိုက်ပါ ငွေဝင်လာလိမ့်မယ်…
“စီးပွားတိုး လာဘ်ရွှင် ဘုန်းပွင့် ကံပွင့်”(ပွဲတွေ့ယတြာ) နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့မှာ နှစ်သစ်ကို အလှူအတန်းဖြင့် ကျက်သရေရှိစွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ တစ်နှစ်တာလုံး ကံကောင်း လာဘ်ရွှင်စီးပွားတိုးစေရန်ပြုလုပ်ရတဲ့ ယတြာကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိကပ်ဘေးအခြေအနေအရ ယတြာလုပ်ဖို့အခက်အခဲ ရှိနေကြမယ်လို့လည်း ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ အာရုဏ်တက်အချိန်တွင် မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအား ပန်း ၈မျိုးဖြင့် နို့ထမင်း ၁ပန်းကန် ကပ်လှူရင်းနှစ်တစ်နှစ်တာ ကာလအတွင်း စီးပွားတိုးစေဖို့
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ မြတ်ဘုရား ဆံတော်ရှင်အစစ်ပါ….(အများပြည်သူ ဖူးမျှော်နိုင်အောင် မျှဝေပေးပါအုံးနော်..)
ရသစုံ | August 10, 2020
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ မြတ်ဘုရား ၏ ဆံတော်ရှင်အစစ်ပါ။ ဖူးမြော်ကြည်ညို ကံထူးကံကောင်း နိုင်ကြပါစေ။ အရွယ်သေးသော်လည်းအရေးကြွယ်သည့်ကျွန်းနိုင်ငံ ဗုဒ္ဓစာပေကျမ်းဂန်တို့၌ လင်္ကာဒီပဟုထင်ရှားခဲ့သည့် ဂေါတမဘုရားရှင် ပရိနိဗ္ဗာန်စံလွန်တော်မူပြီး နောက်တွင် ဗုဒ္ဓအယူဝါဒနေလိုလလိုထွန်းပခဲ့သောကျွန်း၊ ယွန်းဆွမ်းအုပ်၏ ပုံသဏ္ဌာန်ကဲ့သို့မြေမျက်နှာပြင်ရှိသည်။ မဟာဝံသ၊ ဒီပဝံသခေါ် ရှေးမှတ်တမ်းများဖြင့် ကျွန်းနိုင်ငံ၏သမိုင်းများကို ထိန်းသိမ်းလာခဲ့သည်။ သီဟိုဠ်ကျွန်းနှင့်ကျေးကုလားများ၊ ပေါတူဂီနှင့်ဒတ်ချတို့နယ်ချဲ့ပုံ၊ ဗြိတိသျှဓနသဟာယ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်အရေးပါပုံတို့ကိုတင်ပြထားသည်။ ပြာလဲ့လဲ့ပင်လယ်ရေပြင်ဖြင့် ဝိုင်းရံလျက်ရှိ၍ စိမ်းစိုသာယာလှပသော
ရတနာပုံကိန်းဆိုက်သဖြင့် ၂၀၂၀၊သြဂုတ်လအတွက် ထီဆုကြီးများပေါက်နိုင်သော နေ့နံပိုင်ရှင်များ
၂၀၂၀၊သြဂုတ်လအတွက်ကြာသပတေးနှင့်သောကြာသားသမီးများ ရတနာပုံကိန်းဆိုက်သဖြင့် ထီဆုကြီးများ ဆွတ်ခူးနိုင်သည်။ထီပေါက်ကံ အားကောင်း နေတတ်သည်။ကြာသပတေးသားသမီးများ ရတနာနက္ခတ်၂၄လုံး ကျရောက်ချိန်၂၀၂၀၊သြဂုတ်လ(၁၃)ရက်၊နံနက်၉နာရီတိတိမှ နံနက်၉နာရီ၄၀မိနစ်အတွင်း ထီကံစမ်းနိုင်သည်။သောကြာသားသမီးများ ရတနာနက္ခတ်၂၆လုံး ကျရောက်ချိန်၂၀၂၀၊သြဂုတ်လ(၁၄)ရက်၊ည၈နာရီမှည၈နာရီ၄၅မိနစ်အတွင်း ထီကံစမ်းနိုင်သည်။ unicode ၂၀၂၀၊သွဂုတျလအတှကျကွာသပတေးနှငျ့သောကွာသားသမီးမြား ရတနာပုံကိနျးဆိုကျသဖွငျ့ ထီဆုကွီးမြား ဆှတျခူးနိုငျသညျ။ထီပေါကျကံ အားကောငျး နတေတျသညျ။ကွာသပတေးသားသမီးမြား ရတနာနက်ခတျ၂၄လုံး ကရြောကျခြိနျ၂၀၂၀၊သွဂုတျလ(၁၃)ရကျ၊နံနကျ၉နာရီတိတိမှ နံနကျ၉နာရီ၄၀မိနဈအတှငျး ထီကံစမျးနိုငျသညျ။သောကွာသားသမီးမြား ရတနာနက်ခတျ၂၆လုံး ကရြောကျခြိနျ၂၀၂၀၊သွဂုတျလ(၁၄)ရကျ၊ည၈နာရီမှည၈နာရီ၄၅မိနဈအတှငျး ထီကံစမျးနိုငျသညျ။
သုတစုံ | August 7, 2020
နဂါးသိုက်ကနဂါးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့သာ ရှဲသွားဝင်ငွေတွေဒီရေအလားတိုက်တက်လာပါလိမ့်မယ် ဆုတောင်းတိုင်းပြည့်ချင်သူတိုင်းနဂါးဥနဲ့ နဂါးအမြူတေကိုမြင်တာနဲ့သာရှဲသွားလိုက်ပါ unicode နဂါးသိုကျကနဂါးယုံယုံကွညျကွညျနဲ့သာ ရှဲသှားဝငျငှတှေဒေီရအေလားတိုကျတကျလာပါလိမျ့မယျ ဆုတောငျးတိုငျးပွညျ့ခငျြသူတိုငျးနဂါးဥနဲ့ နဂါးအမွူတကေိုမွငျတာနဲ့သာရှဲသှားလိုကျပါ
စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းမှာထွက်လာတတ်တဲ့ လာဘ်ကောင်လေးပါ..(ရှယ်လိုက်ကြပါအုံးနော်)
မင်္ဂလာပါရှင် အောင်းရှစ်ပါးဂါထာအကြောင်းလေးပြောပြခြင်ပါတယ် ။ ကျမအဖေက အောင်ခြင်းရှစ်ပါးဂါထာကိုအမြဲရွတ်ခိုင်းပါတယ် အနက်ျကာပါဋိကော အစကတော့ ပါဋိပဲရတာ အဖေကအနက်ကောအလွတ်ရအောင်ကျက်ထား အနက်ပါရွတ်ဆိုမှ ပိုပြီး ထိရောက်တာ လို့ ပြောတယ်။အစကတော့ ကျက်ရမှာပျင်းတာပေါ့ အနက်ကအရှည်ကြီးပဲလေ။ အဖေကပြောပါများလာတော့ ကျမလည်းကျက်ဖြစ်သွားတယ်။အောင်ခြင်းရှစ်ပါးဂါထာကိုရွတ်ရင် အနှောက်ယှက်လည်းကင်းတယ် ကိုယ့်ဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝမယ် လို့အဖေကပြောပါတယ်။ ကိုယ့်ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာတခု အဲ့ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်က အမြဲတမ်းအောင့်မေ့ ရင်
အရမ်းကို ပီတိဖြစ်စရာကောင်းလွန်းလှတဲ့ မြင်ကွင်ပါပဲဗျာ..(ကိုယ်စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းနိုင်ကြပါစေဗျာ…)
အာရုဏ်တက်ချိန် နံနက်စောစော အိပ်ယာထ ဘုရားဆွမ်းကပ် သောက်တော်ရေကပ် သစ်သီး ကပ် ဘုရားရှိခိုး စသော နံနက်ခင်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ ပြုလုပ်လေ့ ရှိကြသော တကာ တကာမများ သိဖို့ လိုအပ်ပါတယ် အာရုဏ်မတက်ပဲ ဘုရားရှိခိုး ရေကပ် ဆီးမီးကပ်လှူတာ အပြစ်မဟုတ်ပေမယ့် စားဖွယ် ဆွမ်း သစ်သီး မုန့် ကပ်လှူရင် ဝိကာလဘောဇန
ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်လို့ ပေါ်လာတဲ့ နတ်နဂါး…(လိုသလောက်ငွေရေပြီး ရှယ်လိုက်ပါ..)
အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ ကျေးမင်းလာဘ်ခေါ်ဂါထာတော်ကြီး..(အများအတွက်လည်း မျှဝေပေးလိုက်ပါအုံးနော်….)
ကျေးမင်းလာဘ်ခေါ်ဂါထာတော်အဂ္ဂေါဗုဒ္ဓေါ အဂ္ဂေါ ဓမ္မောအဂ္ဂေါသံဃောအနုတ္တရော။အဂ္ဂေါစဝိပါကောဟောတိယံယံဣစ္ဆာသမိဇ္စုတုဤ ကျေးမင်းလာဘ်ခေါ်ဂါထာ ကြီးသည်အလွန်အစွမ်းထက် မြက် သောဂါထာ တော် ကြီး ဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့ သောနှစ် ပေါင်းနှစ်ရာနီးပါးခန့်အ နောက်ဘက်သာလွန်မင်းတရားလက်ထက်ဗားမဲ့ဆရာတော် ကြီးတို့အသုံး ပြု့ သွား သောဂါထာတော်ကြီးဖြစ်ပါသည်ပုံမှန်အားဖြင့် နံနက်၆နာရီမှ၁၀နာရီအတွင်း ရွတ်ဖတ် ပေးရပါမည်။ နေ့စဉ်အနည်း ဆုံး ၁၅ ခေါက် မှ၁၀၈ ခေါက်တိတိရွတ် ပေးနိုင်ပါသည်။အကျိူးကျေးဇူးမှာအနန္တပင်